Arimaha Bulshada iyo Sh Bashir
Dadka Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi oo cabsi aad u xoogan soo wajahday.
on September 22 2013 Dadka Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa waxaa lasoo darastay cabsi iyo welwel aad u xoogan, taas oo la xiriirta in loo dhibaateeyo weerarka abaabulan ee lagu qaaday suuqa Westgate ee ku yaala bartamaha magaaladaas, kaas oo ay mas'uuliyadiisa sheegteen Xarakada Al-shabaab.
Ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayaa markii ay qaraxyo ceynkaan oo kale ah ka dhacaan dalkaas waxay bilaabaan howlgalo ka dhan ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii, halkaas oo ah xaafad ay si aad ugu badan yihiin Soomaalidu dalkaaas ku nool, ka dibne dhibaatooyin kala duwan halkaasi loogu geysto.
Dadka Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa wadnaha farta ku haaya, waxayna ka cabsi qabaan talaabada ay qaadi doonaan ciidamada booliska ee dalkaas, ka dib marka lasoo afjaro weerarka iyo xiisadaha ka socda suuqa Westgate, iyagoona ka cabsi qabo in bar-tilmaameed laga dhigto.
Mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya ee ku sugan dalka Kenya ayaa hore u balan-qaaday inaan dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan aan lagu dhibaatayn doonin gudaha dalkaasi, islamarkaana ay arimahaasi kala hadleen saraakiisha amniga ee dalkaas.
Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa indhaha ku haaya waxa ka socda suuqa West-gate ee ku yaala magaalada Nairobi, waxayna ka walwal qabaan waxa xigi doona iyo talaabada ay ciidamada booliiska dalkaasi qaadi doonaan.
Xafiiska Warbaahinta Bulshoweyn.com ee Magaalada Nairobi.Nagala Soo Xiriir:- info@bulshoweyn.com